I-china i-led eguqukayo yeentloko eziphuma ngaphandle kokukhanya kwemveliso kunye nefektri | Saselux
Iintloko ezimbini zoku kukhanyisa okungxamisekileyo okukhokelwayo okukhokelwayo kune-12 SMD ye-LED. Ubomi bayo ngaphezulu kweeyure ezingama-50000. I-120-277V iyasebenzela ukukhanya. Ixabiso lamandla yi-3.5W max. Yakhelwe-ngaphakathi kwi-3.6V Ni-Cd ibhetri yogcino ngaphezulu kwemizuzu engama-90 yexesha likaxakeka.
* Ukunyusa udonga, ukunyusa isilingi
* Igalelo Voltage: 120 / 277VAC 60Hz
* Super eqaqambileyo ye-SMD ye-2x1.75W
Ubukhulu: 339.5x 115 x 94.8mm
① [Izibane eziNgxamisekileyo] i-120V-277V ye-AC yokusebenza kwamandla ombane, i-90V-0 yokulinganisa ilangatye, inaliti ebunjiweyo ye-thermoplastic ABS yezindlu. Ukukhanya okungxamisekileyo kwakhiwe ngebhetri ye-3.6V Nickel cadmium ubuncinci kwimizuzu engama-90 yokusebenza okungxamisekileyo. Ubushushu obusebenzayo ngu -10 ℃ -40 ℃.
② [Ukuqinisekiswa kunye nokuvavanywa] Ukukhanya okungxamisekileyo kwe-LED kudlulile kuvavanyo olungqongqo. Ineziqinisekiso ze-UL kunye ne-CUL. Uvavanyo lokutshintsha kunye nesalathiso sokutshaja kuvavanywa ngokungqongqo amaxesha angama-2000. Umgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu zizinto zethu ezizodwa.
Easy [Kulula ukuyifaka] Le mveliso kulula kakhulu ukuyifaka, yimizuzu nje embalwa. Ukunyusa udonga kunye nokufaka isilingi ziindlela zokufaka. Zonke izixhobo zifakiwe. Kuya kubakho incwadana yakho. Sukuba nexhala lokuba uza kuyifaka njani.
④ [Isampula kunye nokuHanjiswa] Sinokukunika isampulu enye okanye ezimbini ngaphambi kokuthenga. Kodwa kufuneka uhlawule umthwalo. Ukuba iodolo yakho ihlangabezane neemfuno zethu ze-MOQ, ukuthuthwa kwesampulu kuya kuhlawulwa sithi. Ngokwesiqhelo, iindlela zothutho: ngomoya, ngolwandle kunye nokubonisa.
⑤ [Isicelo] Isibane esingxamisekileyo se-LED singasetyenziselwa ukugcina, ihotele, irestyu, i-cinema, njl.
Egqithileyo Isibane esingxamisekileyo seBattery yokugcina ukukhanya
Okulandelayo: Ukukhanya kwe-LED yoKhanya ngokuKhanya kwe-UL / CUL